SHIRKII TOLKAY KAMA FILEYN NATIIJO LA’AAN MAXA QALDAMAY! – hogaanka.org
26 June 1960 Xoriyadii La Tuuray 1 July 1960 Ma La Hantay 18 May 1991?
SHIRKII TOLKAY KAMA FILEYN NATIIJO LA’AAN MAXA QALDAMAY!
Waxaa aan filayey kol hadii Garxajisweyne buurtii gacan libaax dusheeda mudo Todobaad ah ku shirayeen in go’aano wax ku ool ah oo Somaliland dalka iyo dadkaba wax tar u lehi ka soo bixi doono kol hadii wax garadkii tolkay meesha iskugu yimaadeen oo maskaxda shiilayaan oo talooyin waaweyn oo aad dadka iyo dalkaba ifiya ka soo baxo balse ma arag mana maqal wixii aan filayey su’aasha aan is waydiiyey waxay tahay maxaa qaldan ee shirka wixii laga filayey gees mariyey?
Inta aanan qaladka u gelin aan soo bandhigo waxaa aan anigu ka filayey in go’aanada shirku noqondoonaan.
I-Shirka waxaa aan ka filayey in ugu horeyn xaalada nabadgelyada ee dalka diirada lagu saaro oo ay ugu horeyso.
a) Dagaalka labada beelood ee ceel Afweyn oo mudo dheer xal loo la’aa beeshuna qayb ka tahay dagaalkaasi kol hadii jilib ka mid ahi dhibtaa qayb ka yahay.
Taas macnaheedu wuxuu yahay in shirku bayaanka ku aadan dagaalkaasi uu war cad ka soo saaro oo jilibka ka tirsan beesha gar iyo gardaraba ku qasbo iney heshiis dhaba ka saxeexaan odayaasha iyo dadka kale ee hogaaminaya dagaaladaasi ,dinaca kalana u soojeediyaan iney iyaguna culeys ku saaraan jilibka kale. Balse ma dhicin ee waxaa bayaanka ku cad uun canaan iyo in dawladu shaqada arintaasi u taalo.
b) Taago iyo hambalyo Ciidamada qaranka oo iska caabiyey gardarooyin mudadan dambe uga imanayey dalka aynu jaarka nahay ee Somaliya tageerana u muujiyaan ciidamada qaranka cambaareeyaana gardarada dawlada Somaliya, arintaana shirka bayaankii ka soo baxay kumuu jirin waana arin muujinaysa in aan shirku arintaa ka gaabiyey.
II) Shirka iyo Siyaasada shirka oo dad badani aaminsanayeen in si weyn loogu falanqayndoono dhinaca siyaasada ee Marxaladahan dambe ee Somaliland ayaa aanay ka muuqan istiraajiyad siyaasadeed iyo aragti dheer oo ku saleysan Somaliland waxaa aan taas ula jeedaa arimahan:
Aqoonsiga qaranimada Somaliland iyo sida beeshu ugu hawlgaleyso ugana shaqayneyso sidii Somaliland aqoonsi rasmiya u helilahayd wax ku lugleh kama aanan maqan laguna soo hadal qaadin.
Beeshu sidii ay u saxi lahayd fashilkii tageeradii mudane cabdiraxamaaan ee guul daradii dorashadii sanadkii hore ka soo gaadhey iyo wixii keenay guul daradaasi iyo sidii beeshu u saxi lahay .Taasina kama soo bixin balse dhaliilo tiro badan oo salka ku haya reero ay tilmaameen iney boobeen hantidii dalka iwm.
Beesha waxaa laga filayey iney doorashooyinka dambe ee Somaliland ee soo socda sidii ay beeshu u soo saari lahayd hogaamiye cusub oo bulshada Somaliland wada hanan kara quluubtooda in ay dhabarka ka taabtaan balse taasina ma dhicin.
Beesha waxaa lagu dhaliilaa siyaasiintoodu iney Somalidii midoowday 1 July 1960 weli ka quusaan oo quud dareenayaan marka tusaale u soo qaadano siyaasiinta waaweyn ee uu ka mid yihiin 1- Cismaan Kaluun 2- Gen. Jamac M. Qaalin 3- Prof.Buubaa oo imika hargeysa jooga intaasi oo rag miisaan leh ahi waa kuwo qawadsan Somaliland,balse dadka beeshu waa kuwo ka go’an tahay Somaliland oo naf iyo maalba u huray dalkooda iyo dadkooda balse laga yaabo in waswaas ku furayaan siyaasiintu. Taas waxaa aan ka dheehan karnaa in shirku dhinaca siyaasada xooga saarey saami qaybsi iyo cadaalad daro ka jirta nidaamka Somaliland taasi waxay muujinaysaa shaki badan oo daba socda tabasho doorashadii sanadkii hore ee lagu kala calaf qaadey taasi oo muujin naysa shirkan in ururka wadani loogu baroordiiqayey.
Si kastaba ha ahaatee waxaa aan aamin sanahay in laka saaro siyaasada dalka iyo danaha siyaasadeed ee shaqsiga ah ee beel lagu soo gabanayo beeshu waa qayb ka mida bulshada balse siyaasadu ma aha mid beel salka ku haysa waa mid aragti xisbiyeed leh oo mideeya bulshada kuwa isku danaha ah eek u saleysan danaha degaanada,gobolada,shaqo abuurista,caafimaadka,dhaqaalaha iyo waxbarshada.
Taas waxaa ula jeedaa marka la helo Hospitalo,Schoolo, Jaamicado ama rugo booliis oo reer lee yahay ayaa la odhan karaa reer ku waa isku dan balse reerku waxaa uu dantiisu ku jirtaa waa danta bulshada dalka iyo dedkeeda.
Arintani waa aragtida aan ka qaatey shirkii reer tolkay.
Allah(swt) Mahad dhamaanteed iska leh.
26 June 1960 Xoriyadii La Tuuray 1 July 1960 Ma La Hantay 18 May 1991? Previous
SHIRKII TOLKAY….. Next